ငါးပိရည်ကို ဆမ်းမစားပါနှင့် . . . – Healthy Life Journal
ငါးပိရည်ကို ဆမ်းမစားပါနှင့် . . .
Posted on မတျ 8, 2018
မြန်မာလူမျိုးတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ငါးပိရည်ကို ထမင်းထဲဆမ်းမစားဘဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သာ တို့စားသင့်ကြောင်း အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ငါးပိရည်ကိုအထူးသဖြင့် ဆီးချိုသမားတွေက စားလို့ရလားလို့မေးပါတယ်။ အနည်းငယ်စားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါးပိရည်ကိုတို့ပြီးပဲစားပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက ငါးပိရည်ကို ထမင်းထဲဆမ်းစားကြတယ်။ အဲဒီလို မစားရပါဘူး။ အဲဒီလိုစားရင် သွေးတိုးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငါးပိရည်ကို တို့စရာဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးနဲ့ တို့ပြီးပဲစားသင့်ပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်ကဆိုသည်။
ငါးပိရည်ကို ထမင်းထဲလောင်းချပြီး စားသည့်အလေ့အထကြောင့် သွေးတိုးရောဂါဖြစ်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ ငါးပိရည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်၍ စားမည်ဆိုလျှင် တို့ပြီးသာစားသင့်ကြောင်းသိရသည်။
“ငါးပိရည်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတို့အမြှုပ်တွေနဲ့ တို့စားတာက ပိုပြီးသင့်တော်တယ်၊ အရသာလည်း ပိုကောင်းတယ်၊ ပရိုတင်းဓာတ်ကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါးပိရည်ကို ဆမ်းစားမယ်ဆိုရင် ကယ်လိုရီပိုရပြီး ဆိုဒီယမ်ပိုရသွားနိုင်ပါတယ်။ ငပိရည်ကို ငါး ၁၀၀ ဂရမ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင် ပရိုတင်းဓာတ်က ၂၀ ဂရမ်ရပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုက ၂၃၀၀-၂၈၀၀ မီလီဂရမ်ကြားရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေဆိုရင် လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး”ဟု ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်ကဆိုသည်။
အိမ်တွင်ငါးများကို အပုပ်ခံပြီး ဆားဖြင့်သာလုပ်ထားသည့် ငါးပိရည်ဆိုလျှင်5ml ပမာဏလောက်သာ ကယ်လိုရီ ၂၀ခန့်ရကြောင်း၊ ငါးပိရည်လုပ်ရာတွင် ငါး ၁၀၀ ဂရမ်ပါလျှင် ကယ်လိုရီ ၁၀၀- ၁၂၀ လောက်ရနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Related Items:fish paste, myanmar traditional food, ngapi